डेङ्गुसार्ने लामखट्टेका लार्भा र प्यूपा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान – PuraKhabar
डेङ्गुसार्ने लामखट्टेका लार्भा र प्यूपा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान
March 13, 2018 पुराखबर
रत्ननगर, चितवन २९ फागुन । चितवनका विभिन्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टेका लार्भा र प्यूपा खोजेर नष्ट गर्ने अभियान शुरु गरेको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका किट नियन्त्रण निरीक्षक रामकुमार केसीकाअनुसार भरतपुर महानगर, राप्ती नगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा लामखुट्टेका लार्भा र प्यूपा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान शुरु भएको हो ।
गर्मी मौसम बढ्न थालेकाले अब डेङ्गु रोग पनि फैलनसक्ने भएकाले रोेग आउनुभन्दा पहिले नै नियन्त्रणका लागि उक्त अभियान थालिएको केसीले जानकारी दिनुभयो । चितवनको राप्ती नगरपालिकामा सोमबारदेखि तीन दिने अभियान शुरु भएको छ ।
यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा भोलिदेखि अभियान शुरु हुँदै छ भने कालिका नगरपालिकामा आगामी बिहीबारदेखि तीन दिने ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान चलाइने केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवीका गरी करिब १०० जना परिचालन गरिने छ । खैरहनी नगरपालिकामा भने रोगको विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ ।
स्वयंसेवकले घरघरमा गएर डेङ्गु रोग, यसको सर्ने कारण र सावधानी अपनाउने विषयमा जानकारी दिने, लामखुट्टेका लार्भा भए नभएको हेर्ने र फेला परेमा नष्ट गर्ने गर्छन् ।
चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ५७ जनामा डेङ्गु रोग लागेकामा ३१ जना चितवनका बिरामी र अरु बाँकी भने अन्य जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका बिरामी छन् । चितवनमा उपचारका लागि ल्याइएका मकवानपुरका एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । माघ र फागुनमा भने डेङ्गु भेटिएको छैन ।
मुुख्यगरी ‘एडिस एजेप्टाई’ नामको संक्रमित पोथी लामखट्टेले टोकेमा यो रोग सर्ने चिकित्सक डा भोजराज अधिकारीले बताउनुभयो । डेङ्गु सार्ने लामखुट्टले जमेको सफा पानीमा फूल पार्ने र बच्चा हुर्काउने भएकाले घरवरपर यसरी कुनै पनि भाँडामा पानी जम्न दिनु हुँदैन ।
नेपालमा सन् २००४ मा पहिलो पटक चितवनमा डेङ्गु देखिएको थियो । २०१० अर्थात आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा चितवनमा महामारी फैलिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नेपालमा बर्षेणी हवाइ दुर्घटना – आयोग बन्छ तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन
आज वि.सं. २०७४ साल फागुन ३० गते, बुधबार। हेर्नुहोस तपाइको आजको दिन कस्तो रहनेछ
काठमाडौं / जनैखटिरा (हर्पसजोस्टर) एक प्रकारको भाईरल ईन्फेक्सन हो । यसलाई पीडादायक समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ...
नवलपरासीको प्रतापपुरमा वृहद स्वास्थ्य शिविर
झविन्द्र देवकोटा नवलपरासी, २ असार । नवलपरासीको प्रतापपुर नगरपालिकामा शनिबार वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा औषधी वितरण...
अब विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने !
गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ ।महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्र्तगत राखिएको...